Guddoomiyaha doorashooyinka dadban Cumar Dhageey oo jawaab kulul ka bixiyay eedeymo dhawaan loo jeediyay (DHAGEEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha doorashooyinka dadban Cumar Dhageey oo jawaab kulul ka bixiyay eedeymo dhawaan loo jeediyay (DHAGEEYSO)
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban Cumar Maxamed Cabdulle Dhageey ayaa jawaab kulul ka bixiyay eedeyn loo jeediyay, wuxuuna sheegay in doorashada madaxweynaha aysan marnaba dhaafi doonin sanadka 2016-ka islamarkaana haatan la doortay in ka badan 200 oo xildhibaan.
Cumar Dhageey ayaa sheegay in tirada xildhibaan ee la doortay ay haatan gaaraan kooram ay shirarkooda ku bilaaban karaan, islamarkaana ay dooran doonaan madaxda dalka, isagoo ku dooday in shirayaan xildhibaanada la doortay oo ay is baranayaan shaqaduna socon doonto.
Wuxuu sidoo kale sheegay in shirarkaasi ay yeelanayaan xildhibaanada ay noqon doonto mid horudhac ah islamarkaana aysan ahayn mid kaliya loosii xayirnaanaayo inay soo dhameystirmaan tirada xildhibaan.
Hadalkaan jawaabta kulul ah ee kasoo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadbadan ee dalka Cumar Dhageey ayaa u muuqda mid uu kaga jawaabayo eedeymo dhawaan kaga yimid musharixiinta ku tartameeysa madaxweynaha Soomaaliya.
Mushariixinta qaar ayaa ku doodaya inaysan sharci ahayn in la qabto doorashada madaxweynaha Soomaaliya hadii aan lasoo dhameystirin tirada xildhibaan ee wax dooran lahayd, iyadoona arrinkaan uu yahay mid cirka isku sii shareeray.